သတင်းလွှာနံပါတ် ၈ ဆောင်း ဦး ရာသီ ၂၀၁၉ - ဆုပေးဖောင်ဒေးရှင်း
ပင်မစာမျက်နှာ သတင်းလွှာအမှတ် 8 ဆောင်း ဦး ရာသီ 2019
သတင်းလွှာအမှတ် 8 ဆောင်း ဦး ရာသီ 2019
မင်္ဂလာပါ။ ဆောင်း ဦး ရာသီသည်“ မြူခိုးနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအချိန်ကာလ” သည်ငါတို့အပေါ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မင်းကနွေရာသီကောင်းကောင်းရမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ဤတွင်နွေးထွေးသောသတင်းများနှင့်သင်၏လမ်းပေါ်တွင်သင့်ကိုကူညီရန်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များပါဝင်သည်။
အသစ်စက်စက် တိုတို, ကာတွန်း ဗီဒီယို အကွောငျး အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာများအတွက်အသက်စစ်ဆေးခြင်း လိုအပ်တယ် နှင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏အထွေထွေယောဂီတော်များဆိုင်ရာတော် ၀ င်ကောလိပ် ၃ ခုအကြောင်းကိုသင့်အားအသိပေးရန် (RCGP) -accredited အလုပ်ရုံ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြောင်း အောက်တိုဘာလနှင့်နိုဝင်ဘာလများတွင်။
ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာသို့မဟုတ်အခြားလူမှုရေးမီဒီယာများသို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုသောအီးမေးလ်လမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ဖြန့်ဝေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ဗီဒီယိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်လုပ်နေပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့်မိဘများက ၄ င်းတို့၏ကလေးများအားပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆရာများကမျှဝေနိုင်သည်။ ကျောင်းသားများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လူမှုရေးအလုပ်ကျွမ်းကျင်သူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများနှင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်စီစဉ်ထားသောအရေးကြီးသောဤဥပဒေပြthe္ဌာန်းချက်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကြောင်းရင်းများကိုနားလည်စေနိုင်သည်။ လာမယ့်လအတွင်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်။
နောက်ဆုံးပေါ် RCGP အသိအမှတ်ပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ
ဆရာများ၊ လူငယ်များအတွက်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များကို TRF စတင်မည်
ယူကေအစိုးရသည်ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုခံရသူများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်ကျူးလွန်သူများကိုရှာဖွေရန်ရန်ပုံငွေပေါင်သန်း ၃၀ ထောက်ပံ့မည်
ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပါသည် ဘလော့ဂ် အားလုံးထုတ်ဖေါ်ဖို့ဗီဒီယိုနှင့်အတူ။
ဤလူကြိုက်များပြီးစျေးသိပ်မကြီးသည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသည်တော်ဝင်ကောလိပ်၏အထွေထွေ Practitioners ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အစဉ်တစိုက်ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးမှုယူနစ်များဖြင့်လာသည်။ သူတို့ဟာ Killarney 25 မှာကျင်းပနေကြတယ်th အောက်တိုဘာ၊ Edinburgh ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁၃ ရက်th နိုဝင်ဘာလ, Glasgow သောကြာနေ့ 15th နိုဝင်ဘာ။ ကျန်းမာရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်းလေ့လာပါ။ အကြောင်းအရာအသေးစိတ်၊ အချိန်ဇယားနှင့်စျေးနှုန်းများကိုကြည့်ရှုပါ ဒီမှာ.
ဆရာများ၊ ကျောင်းအုပ်များ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ မိဘများနှင့်ကျောင်းသားများ၏အကူအညီဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးမှုအပြီးတွင် TRF သည်လာမည့်အပတ်များတွင်ဆရာများနှင့်လူငယ်လုပ်သားများအသုံးပြုရန်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များကိုစတင်မည်။ ၎င်းတို့တွင်ခေါင်းစဉ်များဖြင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်သင်ခန်းစာများပါဝင်လိမ့်မည်။ Sexting နှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၊ Sexting နှင့်ပညတ္တိကျမ်း; အပြာစာပေနှင့်သင်၊ စမ်းသပ်မှုနှင့်အပြာစာပေ။
လိင်ပညာပေးသူများအနေဖြင့်အဓိကအားဖြင့်သင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ကိုအဓိကထားသင်ကြားပေးသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံသောအဆင့်တွင်ယနေ့ကလေးငယ်များရရှိနိုင်သောအသည်းအသန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်အတွက်၎င်းသည်လုံးဝမလုံလောက်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများကသဘောတူကြသည်။ လိင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်စွဲလမ်းစေသောရောဂါအဖြစ်အလျင်အမြန်ပေါ်ထွက်လာသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာသုတေသန၏နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီဆန်းပြားမှုရှိရန် TRF သည်ယခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယိုကိုဟားမားရှိအပြုအမူစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာဆွစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတွင်စာတမ်း (၂) ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတင်ပြခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်။ နောက်ဆုံးသုတေသနအပေါ်အဓိကအစည်းအဝေးများသို့သွား။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဂျာနယ်အဘို့ဤအအကျဉ်းချုပ်ရေးသားခြင်းလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်တွင်ရောဂါအသစ်ဖြစ်သောရောဂါလက္ခဏာပြလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (ICD-11) ကောင်းစွာဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။ CSBD အတွက်ကုသမှုကိုရှာဖွေနေသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆိုင်သောပြissueနာရှိသည်ဟုသိရသည်မှာရိုးရာလိင်စွဲလမ်းမှုပြpartnersနာဖြစ်သည်၊ ဥပမာမိတ်ဖက်မျိုးစုံနှင့်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်မကြာခဏဆိုသလိုလိင်လုပ်သားများ။
porn သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့သူတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင်အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောဗီဒီယိုသန်း ၁၁၀ ကျော်ထုတ်လွှင့်သည်။ ၎င်းသည်ကြောက်မက်ဖွယ်စွမ်းအင်များစွာကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်။ CO ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမည်မျှပါဝင်နေသည်ကိုပြင်သစ်အုပ်စု၏ဤအရေးကြီးသောလေ့လာမှုအသစ်ကိုကြည့်ပါ2 ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု။ Porn သည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုအားလုံး၏ ၀.၂% ကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်မှုတိုင်းအတွက်ညစ်ညမ်းမှုသည် ၂ မီလီမီတာကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ Porn သည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးစေသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကကလေးသူငယ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကျူးလွန်မှုများပြားလာခြင်းအတွက်မည်မျှအထောက်အကူပြုသည်ကိုမကြာခဏမေ့တတ်ကြသည်။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီနိုင်သည့်အန္တရာယ်များနှင့်တင်းမာမှုများအန္တရာယ်များအကြောင်းအများပြည်သူအားပညာပေးရန်အတွက်ဤငွေများကိုရရှိနိုင်ခြင်းသည်ကောင်းသည်။ ပုံပြင်အပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ ဒီမှာ.
ပိုလန်နိုင်ငံတွင်အကြီးစားလေ့လာမှု (n = ၆,၄၆၃) တွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကောလိပ်ကျောင်းသားများ (အလယ်အသက် ၂၂ နှစ်) သည်အသည်းရောင်စွဲမှု (၁၅%)၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုအရှိန်မြင့်တက်လာခြင်း (သည်းခံနိုင်မှု)၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုဖော်ပြသည်။ ပြနာများ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတွက်မဟုတ်တော့ဆွနှင့်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းစားသုံးသည့်အခါအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့ရန်လိုအပ်သည်ထက်ပိုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ခြုံငုံကျဆင်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်အစောပိုင်းကထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အလားအလာ desensitization နှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြု...
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုပုံစံနှင့်ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်သောအပြောင်းအလဲများကိုအစီရင်ခံတင်ပြသည် - ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းအမျိုးအစား (၄၆.၀%) သို့ကူးပြောင်းခြင်း၊ လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီသောပစ္စည်းများ (၆၀.၉%) နှင့်ပိုမိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည် အစွန်းရောက် (အကြမ်းဖက်) ပစ္စည်း (46.0%) ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ updated ကိုကြည့်ပါ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှအခမဲ့မိဘများ '' လမ်းညွှန်
မူပိုင်ခွင့်© 2019 အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်း All rights reserved ။